बजारमा भीषण पहिरो, १३०४.४३ विन्दुमा आएको बजार अझै घट्ने अनुमान !
ARCHIVE, MARKET WATCH » बजारमा भीषण पहिरो, १३०४.४३ विन्दुमा आएको बजार अझै घट्ने अनुमान !
काठमाडौँ - नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सेयर बजारको लगानीलाई ‘अनुत्पादक’ भनेपछि त्यसको ठाडो असर नेपाली सेयर बजारमा परेको छ । अझ अर्थमन्त्रीले तत्काल यो भनाइ नसच्याए नेप्से अझै तल झर्ने अनुमान गरिएको छ ।
आज बजार ४१.५६ अंकले घटेर १३०४.४३ विन्दुमा आइपुगेको छ । कुल ४८ करोड ३९ लाख भन्दा माथिको कारोबार भएको बजारमा सबैभन्दा बढी कारोबार एनएलआइसीले गरेको छ भने त्यसपछि क्रमश: एनबिएल र एनआइबिपीओले गरेका छन् । कारोबारको संक्षिप्त विवरण तल हेर्नुहोस् :
हेर्नुहोस् आज बढी कारोबार भएका कम्पनीहरुको विवरण :